Magaalaa Xaaliyaanii tokkotti gamoo hedduun nama malee hafan – Fana Broadcasting Corporate
Magaalaa Xaaliyaanii tokkotti gamoo hedduun nama malee hafan
Finfinnee, Onkololeessaa, 26,2012(FBC) – Xaaliyaatti magaala hawwattu kan taate magaalli Kaamaaraataa jiraattoota harkisuuf gamoowwan seenaa qabeessa ta’an bilisaan mana jireenyaaf kennaa jirti jedhame.
Magaalli miidhagduu fi seenaa qabeettiin kun gamoowwaan 100 ol ta’an nama malee hafuu isaaniin mana jireenyaa bilisaan kennuun jiraattoota harkisuuf yaalii gochaa akka jirtu dubbatame.
Magaalli hawwattuun, umurii dheertuu fi geddu galli seenaa kun duwwaatti hafuu ishee ilaaluu hin danda’u kan jedhan Kaantibaan magaalattii Viinseenzoo Giiyaamibroon abbootiin gamoowwanii nama biroof akka laataan amansiisaa jiru.
Hanga ammaatti manneen 12 duwwaa waan ta’aniif namoota gara magaalittii dhufanii jiraachuu fedhaniif karri banaadha jedhan Giiyaamibroon.
Yeroo dhiyootti manneen hedduun jiraattootaaf kan dabarfaman ta’uus himaniiru.
Haalli kunis ta’uu kan danda’u haal dureewwan yoo mijatanii fi warreen mana jireenyaa fudhatan yeroo jedhame keessatt haaroomsaanii xummuruu qabu jedhameera.
Dabalataan hojiin haaroomsuu yeroo xummuramutti Yuuroo kuma 5 maallaqa taa’u qabaachuun dirqama akka ta’e ibsameera.
Karoorichi dargaggoota ijoollee qabaniif dursa kan laatu yoo ta’u magaalicha ergalii galiinii booda wareen daa’ima horataniif maallaqa Yuuroo kuma 1 jajjabeessituun ni laatama jedhameera.
Gochaan kun magaala Kaamaaraataa keessatti qofa osoo hin taane baatii Eebilaa darbe magaaloota Zuungoolii fi Muusoomeelii keessatti ta’aa akka ture dubbatamera.
Daa’ima umurii 9tti barnootaa Yuunvarsiitii xumurre